Sunday May 13, 2018 - 16:28:25 in Wararka by Super Admin
Wadanka Brundi oo qeyb ah wadamada ciidamada Shisheeye ee gumeysi doonka ah usoo diray Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay weerar khasaare badan dhaliyay oo gallaaftay nolosha dad badan oo Brundees ah.
Kooxo hubeysan ayaa tuullada lagu magacaabo Ruhagarika ee hoostagta gobolka Cibitoke, islamarkaana dhacda xuduuda u dhexeysa Brundia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxay habeenimadii Jimcaha ka fuliyeen howlgal ay ku laayeen dad kor u dhaafaya labaatan ruux oo kamid ah shacabka wadanka Brundia.
Wasiirka amniga Brundia Allain Guillaume Bunyoni oo u waramayay wariyaasha ayaa shaaca ka qaaday in 24 ruux oo ku sugnaa guryahooda la dilay, isagoona intaa ku daray in labo ruux oo kale oo dhaawac ahaa ay ku dhinteen xarumaha caafimaadka ee gobolka Cibatoke oo ah halka uu ka dhacay weerarka.
Bunyoni oo sii hadlayay ayaa ku tilmaamay kooxda weerarka fulisay iney ahaayeen koox Argagaxiso ah oo kasoo gudbay dhanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, markii ay gumaadka geysteen kadibna ku laabteen halkii ay ka yimaadeen.
Goob jooge ka badbaaday weerarka ayaa sheegay in kooxda hubeysan ee dadka leysay ay howlgalkooda billaabeen 10:00 oo fiidnimo, soona gebe-gebeeyeen saq dhexe xilli saacadu ku beegneyd 02:00, waxaana marka laga soo tago rasaas nool nool oo ay adeegsanayeen ay sidoo kale gubeen qaar kamid ah dadka, taas oo keentay in dadka qaar hilbahooda shiilmaan.
"Dembiiliyaashu guri guri ayay u gelayaan tuulada, dadkana way gowraceen" waxaa sidaas yiri sarkaal katirsan Booliiska gobolka uu gumaadku ka dhacay oo la hadlay wakaaladda wararka ee AFP.
Wuxuu intaa ku daray sarkaalkan la hadlay AFP " qaar kamid ah dadka waa la toorreeyay, qaarna Xabad ayaa lagu dhuftay, waxaa xitaa jira qoysas dhan oo nolosha lagu gubay, iyagoo ku sugan guryahooda".
Haweeney kaloo iyadana goob joog ahayd, lana hadashey warbaahinta waxay xaqiijisay in kooxda weerarka fulisay ay wateen baangado, islamarkaana ay dileen ninkeeda iyo labo caruur ah.
Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo 17-ka bishan May lagu wado in wadanka Brundi uu ka dhaco afti dastuuri ah.